Farmaajo “Runtii waa nasiib darro in Xasan Sheekh uu markale sheegto inuu musharax yahay..” (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Farmaajo “Runtii waa nasiib darro in Xasan Sheekh uu markale sheegto inuu musharax yahay..” (DHAGEYSO)
Ra’iisul wasaarihii hore ee xukuumadii KMG ahayd ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo oo maanta la hadlay warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ee uu hogaaminaayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku fashilantay mudaddii 4-ta sano ahayd oo ay dalka ka talineysay.
Mr. Farmaajo ayaa sheegay inay nasiib darro tahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegto musharaxnimo iyo inuu dib u soo laabto, xilli dowladiisa ay ku fashilantay howlihii laga rabay inay dalka ka qabato.
“Runtii waa nasiib darro in Xasan Sheekh uu markale sheegto inuu musharax yahay, iyadoo la ogsoon yahay in dowladda uu madaxda ka yahay ay hogaaminta ku fashilantay, isagoona waqtigiisa ku dhameystay isqab-qabsi, islamarkaana uu afkiisa ka qirtay inuu siyaasadda ku fashilmay. Soomaaliya waxay haatan u baahan tahay in hogaan fiican oo daacad ah ay hesho islamarkaana wax ka qaban kara xaaladda cakiran” Sidaas waxaa yiri Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo.
Dhinaca kale, Mr Farmaajo ayaa shaki badan ka muujiyay in doorashadda dalka u dhici karto xilligii loogu talo-galay, wuxuuna soo jeediyay in muddo kooban laga darro haddii laga maarmi waayo, balse aysan noqon mid sii daba-dheeraata.